Munyori: Gadzira, Shamba, uye Shandisa Inzwi reChiratidzo Chako Uye Chimiro Chinotungamira Neiyi AI Kunyora Mubatsiri | Martech Zone
Sezvinongoita kambani inoshandisa gwara rechiratidzo kuti ive nechokwadi chekuenderana mukati mesangano rese, zvakakoshawo kukudziridza izwi nemaitiro kuti sangano rako rienderane mukutumira mameseji. Inzwi rerudzi rwako rakakosha kuti utaure mutsauko wako zvinobudirira uye kutaura zvakananga uye nemoyo kubatana nevateereri vako.
Chii Chinonzi Izwi Uye Chimiro Chinotungamira?
Nepo madhairekitori ekuona anotarisisa marogo, mafonti, mavara, uye mamwe masitayera ekuona, izwi uye dhizaini gwara rinotarisa pane verbiage, terminology, uye inzwi rinoshandiswa nerudzi rwako kana vanhu vachiteerera kana kuverenga nezvako.
Pane akati wandei maficha kurudzi aunofanirwa kubatanidza muzwi rako uye chimiro chegwara:
Vanhu - ndedzipi dzese tsika, huwandu hwevanhu, dzidzo, uye hunhu hwemutengi wako waunoda?
Maonero - ndeipi fungidziro yaungade kuti vanhu vako vave nerudzi rwako?
basa – ndeipi chirevo chechinangwa chemhando yako?
izwi - Ndeipi inzwi rezwi raunoda kushandisa kuti utaure zvakanaka nevateereri vako? Iwe unoda kuve usina kurongeka, wakanaka, une simba, wakasarudzika, wekutamba, unosimudzira, nezvimwe.
Synonymy - Ndeapi mazwi akafanana nemhando yako, zvigadzirwa, kana masevhisi aunoda kushandiswa kazhinji?
Antonymy - ndeapi mazwi asingambofanirwe kushandiswa kutsanangura mhando yako, zvigadzirwa, kana masevhisi?
Hyponymy - ndeipi chirevo chakanangana neindasitiri yako kana sangano rinofanirwa kuenderana?
tsika - Ndeapi mazwi anoshandiswa kune yako brand, chigadzirwa, kana sevhisi isingashandisi mumwe munhu?
Muenzaniso: Mumwe wevatengi vedu vakakosha ane saiti kwaunogona odha madhirezi online. Iwo madhirezi ane mitengo iri pakati nepakati asi emhando yepamusoro, tinoshandisa mazwi akadai seanotengeka pane zvakachipa… izvo zvingave nechirevo chisina kunaka chemhando. Isu tinotaurawo hapana-kunetswa anodzoka pane kunetseka-kusununguka returns. Nepo ese ari maviri ane chirevo chakafanana, aine izwi vakasununguka munzvimbo yese yaizoisa toni isiriyo patinenge tichitaura nevanhu vanoshanyira saiti - vakadzi vakuru.
Munyori: Iyo AI Kunyora Mubatsiri Wezvikwata
Vanhu vazhinji vanobatanidza izwi uye dhizaini gwara pamwe chete negwara ravo rekuona rechiratidzo kuitira kuti vashandi vatsva kana makondirakiti vagone kuenderana mukugadzira zvemukati zvemhando. Inogona kuiswa muPDF inogoverwa kana yakumbirwa. Kunyange izvo zvinonzwika zvinobatsira, hazvina kunyanya zvinogoneka sezvo vanhu vanofarira kuenderana kwako kwezwi chete ndivo vaizoisa izwi rako uye dhizaini rekushandisa.
Munyori intelligence yekugadzira (AI) kunyora mubatsiri wezvikwata zvine zvese zvinodiwa nechikwata chako. Zvichienderana nepakiti yaunonyorera, unogona kuwana zvinotevera maficha:
Kugadzirisa otomatiki uye kuzadzisa otomatiki yezviperengo, zviperengo, nezvikanganiso zvegirama.
Zvidimbu - zvimedu zvemunhu uye zvechikwata zvezvirevo zvakajairika kana zvinyorwa zvinoshandiswa kakawanda.
Mazano -kurudziro yekuvandudza kunyora kwako.
Terminology - chishandiso chekutonga chematemu chematemu akatenderwa, akamirira, uye asingatenderwe.
Writing Style - kuverenga zvibodzwa, capitalization, kubatanidza, chivimbo, uye kujekesa kugadzirisa.
Basa reChikwata - mabasa uye mvumo yekugadzira yako terminology uye izwi marongero vs vashandisi vanofanirwa kuishandisa.
Styleguide - yakatambirwa, yakaburitswa, uye inogovaniswa masitayera yesangano rako.
Munyori inoshanda muChrome, Microsoft Word, uye Figma. Ivo zvakare vane yakasimba API yekubatanidza chishandiso chavo mune yako edhita maitiro.
Edza Munyori Kwemahara
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Munyori uye ndiri kushandisa yangu affiliate link muchinyorwa ichi.
Tags: aiantonymychakagadzirwa njerebrand missionbrand brandizwi rechiratidzoChromefigmakutarisa giramahyponymymicrosoft wordnounhucheki chepunctuationchipereterwamutungamiriri gwaramazwifananaterminologytoniizwiizwi uye chimiro chekutungamiramunyorikunyora mubatsiri
Chii chinonzi Zero-Bato, Chekutanga-Bato, Chechipiri-Bato, uye Yechitatu-Bato Dhata